Fanampim-baovao mivantana momba ny fitsapankevi-bahoaka any Kenia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Aogositra 2010 21:33 GMT
Mifidy androany ireo olom-pirenena Keniana amin'ny fitsapankevi-bahoaka ho an'ny lalàm-panorenana vaovao. Azonao atao ny manaraka ireo fanampim-baovao mivantana ao amin'ireo vohikala Keniana ary koa ny mahazo tati-baovao momba ireo tranga mifandraika amin'ny fitsapankevi-bahoaka ao amin'ny sarintanin'i Uchaguzi.
Uchaguzi (“fanapahan-kevitra” amin'ny teny Kiswahili) dia dika namboarina avy amin'ny sehatra Ushahidi hanaraha-maso ireo trangana fangalarana amin'ny fifidianana, herisetra ary na ireo hetsika am-pilaminana aza, mandritra ny Fitsapankevi-bahoaka hifidianana Lalàm-panorenana amin'ny 4 Aogositra.
Ushahidi, izay midika hoe fijoroana vavolombelona amin'ny teny Swahili, dia noforonina hitateram-baovao momba ny fotoana aorian'ny fifidianana izay namoizana ain'olona 1000 taorian'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2007.
Uchaguzi dia nanangana Efitrano fanarahana ny Toe-draharaha mba hanomezana fanampim-baovao mivantana momba ny fitsapankevi-bahoaka ary koa hitahirizana azy ireo ho teboka fandrindràna eo noho eo.
Ireto misy tati-baovao vitsivitsy avy amin'ny Efitrano fanarahana ny Toe-draharaha. Tamin'ny 4 Aogositra 2010 tamin'ny 1 ora 33 min maraina, nitatitra i Jessica:
Ahmed Maawy, mpilatsaka an-tsitrapo mavitrika, dia miditra avy any Mombasa hanandrana ny SWIFT RIVER ao amin'ny Uchaguzi!
Tamin'ny 1 ora 08 maraina tamin'ny 4 Aogositra 2010 nitatitra i Erik Hersman:
Fitambaran'ireo Tatitra: 413, salan'isa antonon'ny tatitra isan'andro: 34.42, Voamarina: 79.66%
Omaly tamin'ny 11 ora 53 min atoandro tamin'ny 3 Aogositra 2010, nitatitra i Jessica:
* mpitsidika 1651
* tatitra 59 (hisy an-jatony vitsy fanampiny hampiana rahalina ho an'ny fiandraiketana ny zavatra voalohany)
* Ireo sokajy malaza: (1) Kabary fankahalaina, (2) Disadisa, (3) Ezaka fandriampahalemana
* Voamarina 34%
Tamin'ny 10 ora 38 min alina tamin'ny 3 Aogositra 2010, nitatitra i pthigo:
Haino aman-jerin'i Kenia amin'ny aterineto
Ho an'i Jess, haino aman-jery Keniana miaraka amin'ireo tatitra mivantana
Vohikala media hafa ahitàna fanampim-baovao mivantana dia ny Kassfm sy ny Live-Text an'ny Standard.
Tatitra tao amin'ny Live-Text:
Nohavaozina 8 minitra lasa izay
11:51 ao amin'ny Holy Family Basilica ny Praiminisitra Raila Odinga mba hijery ny fizotry ny fifidianana….
11:45 miteny Isaak Hassan, talen'ny IIEC fa niteraka ny fahataràn'ireo biraom-pifidianana sasany ny orana mivatravatra. Manambara izy fa maherin'ny 90 isan-jaton'ireo biraom-pifidianana no nivoha ara-potoana ary niantso an'ireo manampahefana mpikarakara fifidianana hanampy ireo mpifidy manana olana amin'ny lisi-pifidianana.
Ny IIEC dia namoy Mpiasa Mpiara-mitantana tany Marakwet Andrefana. Nodimandry ny alina teo izy raha narary nandritra ny fotoana fohy. Manao fanambaràna amin'ireo mpanao gazety ny komisiona amin'izao fotoana izao
11:26 Raila dia maminany ny fandresen'ny ENY amin'ny 70 isan-jato ary miantso ireo Keniana hifidy am-pilaminana. Vao avy nifidy vao haingana teo izy tany amin'ny Sekolim-panabeazana fototra any Kibera, Birao ifidianany any Langata.
Izao no nambarany: “Anio dia fotoan-dehibe amin'ny tantaran'ny firenentsika. Ny manan-danja indrindra aorian'ny Fetim-pirenena.”
Ny mpanao tatitra ho antsika, Peter Opiyo da miteny fa mandeha am-pilaminana ny fifidianana any amin'ireo biraom-pifidianana rehetra any amin'ny faritra
11:10 nifidy i Kibaki
11:09 mifidy ny Filoha Kibaki amin'izao fotoana izao ao Othaya ao amin'ny Sekolim-panabeazana fototra any Munaini
(11:05)'Iriako ny hiala ka hametraka lova tsara… Hiala aho afaka 12 volana,’ hoy ny Procureur Général, Amos Wako. I Wako dia nifidy tamin'ny 9 ora 55 mn tany amin'ny Sekolim-panabeazana fototra any Nang'oma. Niteny izy fa hanomboka avy hatrany ny fampiharana.
Kassfm dia manome fanampim-baovao mivantana:
Alarobia 4 Aogositra:
10:45 AM: Mandatsa-bato ao amin'ny Biraom-pifidianana ao amin'ny Sekolim-panabeazana fototra ao Kabarak ny Filoha teo aloha Daniel Arap
10:30 AM: Mandatsa-bato ao amin'ny Biraom-pifidianana ao amin'ny Sekolim-panabeazana fototra ao Kibera ny Praiminisitra Raila Odinga
10:15 AM: Manao fanambaràna amin'ny vahoaka ny talen'ny IIEC, Issack Hassan ao amin'ny toby Tally any Bomas, Kenia
10:00 AM: Ny Minisitry ny Fampianarana Ambony William Ruto dia mandatsa-bato ao amin'ny birao ifidianany any Eldoret Avaratra
10:00 AM: Mitsingilahila ny sambo ampiasain'ny IIEC hitondrana ireo fitaovam-pifidianana any amin'ny reniranon'i tana. Tsy naninona ireo tompon'andraikitry ny IIEC fa very kosa ireo fitaovam-pifidianana
09:20 AM: Mandatsa-bato ao amin'ny birao ifidianany ao Gatundu ny Praiminitra solombavambahoaka Uhuru Kenyatta.
09:20 AM: Mbola mampijaly ny faritry ny Tendrombohitra Elgon ny tsy fahampian'ny làlana fifamoivoizana.
09:00 AM: Mpifidy ao Kaptama, Cheptais ary ireo birao hafa mbola miandry ireo fitaovam-pifidianana
08:18 AM: Eritreretina fa ny ankamaroan'ireo Keniana misoratra anaty lisitra dia hifidy any amin'ireo birao samihafa amin'ny fotoana samihafa amin'iity andro ity.
08:00 AM: Nanomboka aloha tamin'ny 6ora maraina ny fifidianana tany amin'ireo biraom-pifidianana maro any amin'ny firenena, ka marobe ireo Keniana no nivoaka hanamarina fa hampiasa ny zo demokratikany izy amin'ny fifidianana na tsia ilay lalàm-panorenana naroso.
07:00 AM: Mandatsa-bato ao amin'ny sekolim-panabeazana fototra any Kabarak ny Filoha teo aloha Daniel Arap Moi
07:00 AM: Nifoha maraina be ireo Keniana hisedra ny hatsiakan'ny toetr'andro ka handrotsa-bato.
06:00 AM: Nivoha ireo biraom-pifidianana manerana ny firenena.
24 ora izayBorkina Faso